မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): သမိုင်းတွင်သည့် တပင်ရွှေထီး သူရဲကောင်းရွေးချယ်ပွဲအကြောင်း
သမိုင်းတွင်သည့် တပင်ရွှေထီး သူရဲကောင်းရွေးချယ်ပွဲအကြောင်း
တပင်ရွှေထီးသည် တောင်ငူရွှေနန်းကို စိုးစံတော်မူနေရပြီ ဖြစ်သော်လည်း နားထွင်းမင်္ဂလာတော်ကိုကား ပြုတော်မမူရသေးပေ။ ထို့ကြောင့် နန်းတက်ပြီး (၂)နှစ်အကြာ သက်တော် (၁၇)နှစ် အရွယ်ထက်သို့ ရောက်သော်မူသည်တွင် နားထွင်းမင်္ဂလာတော်ကို ကျင်းပပြုလုပ်ရန် စီစဉ်တော်မူသည်။
တပင်ရွှေထီးကား အရွယ်ငယ်စဉ်ကပင် ရန်သူ့နယ်မြေ ဟံသာဝတီတွင်ရှိသည့် ရွှေမော်ဓောစေတီတော်ကို သွားရောက်ဖူးမြော်လိုသည့် ဆန္ဒက ပြင်းပြနေသည်။ ယခုလည်း နားထွင်း မင်္ဂလာကို ထိုရွှေမော်ဓောစေတီတော်၏ ရင်ပြင်ပေါ်တွင်ပင် သွားရောက်၍ ဆင်ယင်ကျင်းပလိုသည့် အလိုဆန္ဒတော် ဖြစ်ပေါ်နေမိသည်။
ထိုအချိန်က ဟံသာဝတီကို မွန်ဘုရင် သုရှင်တကာရွတ်ပိက စိုးစံအုပ်ချုပ်လျက်ရှိပြီး၊ ထိုဟံသာဝတီနယ်မြေတွင် တည်ထားသည့် ရွှေမော်ဓောစေတီတော်ကလည်း လွန်စွာပင် တန်ခိုးကြီးထင်ရှား၏။ ဆုတောင်းလျှင် ဆုတောင်းပြည့်သည်ဟုလည်း ဆိုကြ၏။ ထို့ကြောင့်ပင် မင်းသားများကြံစည်မည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် ‘ရွှေမော်ဓောစေတီတော်ကို မင်းသားများ တက်၍မဖူးမြော်ရ’ ဟုပင် ဟံသာဝတီဘုရင်များက တားမြစ်တော်မူထား၏။
ထိုသို့ တပင်ရွှေထီးအနေဖြင့် ရန်သူ့နယ်မြေသို့ သွားရောက်လိုသည့် အလိုဆန္ဒဖြစ်ပေါ်နေရခြင်းမှာ ယခင်ဘဝက မွန်မင်းသား ဖြစ်ခဲ့ဖူးသောကြောင့်ဟု မဟာရာဇဝင်ကြီး (ဒု) ၁၆၄-၁၆၅ နှင့် မှန်နန်းရာဇဝင်ကြီး (ဒု) ၁၈၉ တို့တွင် ဖော်ပြထားသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ ဖော်ပြထားပုံမှာ ဤသို့ဖြစ်သည်။ မွန်ဘုရင်ဓမ္မစေတီတွင် ‘မင်းရဲကျော်စွာ’ အမည်ဖြင့် သားတော်တစ်ပါးရှိ၏။ ထိုသားတော် မင်းရဲကျော်စွာသည် ငယ်စဉ်ကပင် ထက်မြက်လှ၏။ သူရသတ္တိနှင့် အထူးသဖြင့် ပြည့်စုံ၏။ မင်းရဲကျော်စွာအရွယ်ရောက်လာသောအခါ ခမည်းတော်ဓမ္မစေတီမင်းက မိမိထီးနန်းကို လုယူလိမ့်မည်ဟု ယုံစားသံသယဝင်တော်မူသည်။
တစ်နေ့တွင် ဟံသာဝတီနေပြည်တော်မှ နောက်ပါငယ်ကျွန်များနဲ့အတူ မင်းရဲကျော်စွာ ဒဂုံ(ရန်ကုန်) သို့ သွားရာ မလိုသူတို့က ဓမ္မစေတီမင်းကို ကုန်းချောသည်။ ဘုရင်က လိုက်လံဖမ်းဆီးစေသောအခါ မင်းရဲကျော်စွာကို မိသည်။ ထိုအခါ မင်းရဲကျော်စွာကို မလိုသည့်အမတ် က္ကုန္ဒဇိတ်က ဘုရင့်အမိန့်မရဘဲ မင်းရဲကျော်စွာကို သတ်ရန်စီစဉ်သည်။ မင်းရဲကျော်စွာက အသတ်မခံရမီတွင် ရွှေမော်ဓောစေတီတော်၌ မိမိ၏ဝတ်စားတန်ဆာတို့ကို လှူဒါန်းကာ-
“ငါ့ခမည်းတော်သည် ငါ့၌ အပြစ်မရှိဘဲ ငါ့အား အပြစ်ရှာ၍ ကွပ်မျက်သည်။ ထို့ကြောင့် ငါသည် နောင်ဘဝ၌ မွန်ဘုရင်ကိုနိုင်၍ မွန်သုံးရပ်ကို အုပ်စိုးရသည် ဖြစ်ပါစေသား” ဟု ဆုတောင်းကာ ကွပ်မျက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
ထို့ကြောင့် တပင်ရွှေထီးကို မွန်မင်းသား မင်းရဲကျော်စွာ ဝင်စားသည်ဟု ရာဇဝင်တို့က ဆိုသည်။ တပင်ရွှေထီးသည် ရန်သူ့နယ်မြေ ဟံသာဝတီတွင် သွားရောက်နားထွင်းလိုသည့် မိမိအလိုဆန္ဒတော်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ညီလာခံသဘင်၌ မှူးမတ်သေနာပတိတို့ကို မိန့်တော်မူကာ သဘောဆန္ဒကို တောင်းခံတော်မူသည်။
မှူးမတ်အများက ထိုကိစ္စကို သဘောတူလိုခြင်း မရှိကြ။ ပြုလုပ်ရန် မသင့်ဟု ယူဆကြသည်။ သို့သော် နောင်တော်ရင်း သဖွယ်ဖြစ်သည့် ‘ကျော်ထင်နော်ရထာ’ ဘွဲ့မည်ရ ရှင်ရဲထွတ် ကမူ “ရွှေနန်းရှင် အရှင်မင်းမြတ် . . . ဆန္ဒတော်ရှိသည်မှာ လွန်စွာသင့်လျော်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ယခုကိစ္စသည် မင်္ဂလာကိစ္စဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ အကောင်းဆုံးအောင်မြေဖြစ်သည့် နေရာကိုသာ ရနိုင်ရန် ကြံဆောင်သင့်ပါ၏။ ဟံသာဝတီရှိ ရွှေမော်ဓောစေတီတော်မှာ ဆုတောင်းပြည့် ဘုရားလည်း အမှန်ဖြစ်ပါသည်။
ရန်သူ၏ နယ်မြေသို့ သွားရောက်ရမည် ဖြစ်သော်လည်း ဘုန်းသမ္ဘာနှင့် ပြည့်စုံသော မင်းတို့အဖို့ ကေသရာဇာခြင်္သေ့မင်းသည် ရွှေဂူမှထွက်တော်မူလျှင် မည်သည့်သားသတ္တဝါမျှ မော်လျက် မကြည့်ဝံ့သကဲ့သို့ ရှိမည်။ ဤစကားကို ယုံကြည်တော် မမူပါက ယခုပင် ထွက်တော်မူပါ။ ကျွန်တော်မျိုး ရှေ့မှနေ၍ ရင်မြေကတုတ်လုပ်လျက် အမှုတော်ကို ထမ်းရွက်ပါမည်” လျှောက်တင်လေရာ တပင်ရွှေထီးမှာ ကျော်ထင်နော်ရထာ၏ လျှောက်တင်ချက်ကို နှစ်သက်အားရတော်မူလှသဖြင့် လက်သုံးတော် ကျောက်စီဓားကို ရဲဆုအဖြစ် ကျော်ထင်နော်ရထာအား ပေးသနားတော်မူသည်။
“ယခု ရန်သူ့နယ်မြေဖြစ်သည့် ဟံသာဝတီရှိ ရွှေမော်ဓောစေတီတော်သို့ ထွက်တော်မူမည့်အရေးကိစ္စတွင် မင်းယောက်ျားအမှုထမ်း ဖြစ်ပါလျက် ယောက်ျားကောင်း၊ ယောက်ျားမြတ်တို့၏ ဂုဏ်ရည်မပီ၊ ကြောက်သွေးပါသူများကို ငါကား အလိုမရှိ၊ ခြသေ့င်္ကဲ့သို့ စွမ်းအားရှိလျက်၊ ကျားကဲ့သို့ ရဲရင့်သည့် မကြောက်မရွံ့၊ နောက်မတွန့်သည့် သူရသတ္တိနှင့် ပြည့်စုံသော ကေတုမတီသား သူရဲကောင်း၊ ယောက်ျားမြတ်တို့ကိုသာ ငါ အလိုရှိသည်။ ထို့ကြောင့် နောင်တော်ကျော်ထင်နော်ရထာက ရန်သူ့နယ်မြေကို ငါနှင့်အတူလိုက်ပါမည့် သူရဲကောင်းများကို သေချာစိစစ် ရွေးချယ်မှုပြုစေ” ဟု အမိန့်တော် ချမှတ်သည်။
“ရန်သူ့နယ်မြေသို့ချီရန် အရေးကိစ္စတွင် စစ်သည်ဗိုလ်ပါများစွာ မလိုပါ။ သူရဲကောင်း ငါးရာသာ လိုပါသည်” ဟု ပြန်လျောက်တင်လေရာ တပင်ရွှေထီးက ယင်းသူရဲကောင်း ငါးရာကို ရွေးချယ်ရေးအတွက် ကျော်ထင်နော်ရထာကို တာဝန်ပေးတော်မူသည်။
“ဘဝရှင်မင်းတရားသည် ဟံသာဝတီရှိ ရွှေမော်ဓောစေတီတော်သို့ နားထွင်းမင်္ဂလာသဘင် ဆင်ယင်ကျင်းပတော်မူရန် မကြာမီ ထွက်တော်မူလိမ့်မည်။ အမှုတော်ထမ်း၍ နောက်တော်က လိုက်ပါလိုသူများ ရွှေနန်းတော်သို့ လာရောက်လျှင် သူရဲကောင်းအဖြစ် အရွေးခံကြစေ။ သူရဲကောင်း ငါးရာကို ရွေးတော်မူလိမ့်မည်” ဟု ကေတုမတီ နေပြည်တော်အနှံ့ မောင်းကြေး နင်းခတ်၍ ကြေညာစေသည်။
သူရဲကောင်း ရွေးချယ်ပွဲ ပြုလုပ်မည့်နောက်တစ်နေ့တွင်မူ ကေတုမတီနေပြည်တော်အနှံ့မှ သူရဲကောင်းရွေးချယ်ရန်အတွက် လာရောက်ကြသူများမှာ ရင်ပြင်တစ်ခုလုံးတိုးမပေါက်အောင်ဆိုရမည်သို့ များပြားလှသည်ကို ရွှေနန်းရှင် ဘုရင်တပင်ရွှေထီးမှာ နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်တော်မူစွာ တွေ့မြင်တော်မူလိုက်ရသည်။
ကျော်ထင်နော်ရထာက သူရဲကောင်းအရွေးခံရန် လာရောက်ကြသူများကို . . .
“ယခု ကျွန်ုပ်တို့ ဟံသာဝတီသို့ ချီတက်တော်မူမည့်အရေးမှာ သာမန်မဟုတ်၊ ရန်သူ့နယ်မြေသို့ မကြောက်မရွံ့၊ နောက်မတွန့်ဘဲ ဝင်ရောက်ရမည့်အရေးဖြစ်၍ သာမန်မျှ သတ္တိစွမ်းရည်ရှိသူများကိုကား ရွေးချယ်လိမ့်မည်မဟုတ်။ မ တစ်ထောင် တစ်ကောင်ဖွားဆိုရမည်သို့ လွန်စွာသတ္တိကောင်းလှသူ ထူးထူးချွန်ချွန် အာဇာနည်ရဲစိတ်ရဲမာန်ထက်သန်သော အာဂယောက်ျား သူရဲကောင်းများကိုသာ ရွေးချယ်ရလိမ့်မည်။ စွမ်းရည်သတ္တိ အထူးအချွန် တကယ်ပင် ရှိ မရှိ၊ ယခုပင် စမ်းသပ်တော်မူစေမည်။ သို့ဖြစ်၍ အစမ်းသပ်အစစ်ဆေးခံရန် မဝံ့သူများ ဤနေရာမှ ယခုပင်ထွက်ကြရမည်” ဟု ဆိုလိုက်ရာ ရောက်လာကြသူ ကေတုမတီသားတို့က လက်ရုံးကို အထက်သို့ မြှောက်လိုက်ကြကာ “စမ်းသပ်တော်မူပါ၊ စမ်းသပ်တော်မူပါ” ဟု တညီတည်းပြောဆိုလိုက်ကြသည်။
ထို့နောက် သူရဲကောင်း ရွေးချယ်ပွဲ စတင်ရာ ဦးစွာပထမကျော်ထင်နော်ရထာက အစမ်းသပ်ခံရန် သူရဲကောင်းစမ်းသပ်ရာ နေရာသို့ သွားရောက်လိုက်သည်။ ခုံတစ်ခုံပေါ်တွင် ညာဘက်လက်မကို ထောင်၍ခံလိုက်သည်။ စမ်းသပ်သူတို့က ကျော်ထင်နော်ရထာ၏ လက်မထိပ်တွင် အပ်ကိုစိုက်၍ တူဖြင့် တစ်ချက်တည်းထုမြှပ်လိုက်သည်။ လက်မတွင်းသို့ အပ်တစ်ဆုံးဝင်သွားသည်။ သို့သော် ကျော်ထင်နော်ရထာ မည်သို့မျှ သွေးတွန့်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိ။ တောင်ငူရွှေနန်းရှင် ဘုရင်တပင်ရွှေထီးမှာ နောင်တော်ကျော်ထင်နော်ရထာ၏ အာဇာနည်သူရဲကောင်းသတ္တိကို မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တော်မူလိုက်ရသဖြင့် အလွန်အားရတော်မူသွားသည်။
ဤသို့စမ်းသပ်ရာတွင် အောင်မြင်သူတို့ရှိသကဲ့သို့ မအောင်မြင်၍ နန်းရင်ပြင်မှ ထွက်သွားရသူများလည်း အများအပြားရှိနေ၏။ မအောင်မြင်သူတို့ကား တုန်လှုပ်သွားသူများ၊ နာကျင်၍ ညည်းတွားသူများ ဖြစ်၏။
ထိုသူရဲကောင်း ရွေးချယ်ပွဲတွင် သတ္တိစွမ်းရည်နှင့် ပတ်သက်ပြီး မှတ်သားကြရမည့် အမှတ်ထင်ထင်အဖြစ်အပျက် တစ်ခုက ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရသည်။ ထိုအဖြစ်ပျက်ကား အခြားမဟုတ်၊ သူရဲကောင်းအဖြစ် စမ်းသပ်ခံမည့် တပင်ရွှေထီး၏ ငယ်ကျွန်ရင်းဖြစ်သည့် ဗလရဲထင်၏အလှည့်တွင်ဟု ဆိုရမည်။ ဗလရဲထင်မှာ တပင်ရွှေထီး အရွယ်တော်ငယ်စဉ်အချိန်ကပင် တပင်ရွှေထီးနောက်မှ ဓားထမ်းခွင့်ရသူဖြစ်ပြီး၊ တပင်ရွှေထီးက ဗလရဲထင်ကို သူရသတ္တိရှိသူဟု မှတ်ထင်တော်မူသဖြင့် ဗလရဲထင်ဘွဲ့မည် ပေးသနားတော်မူခြင်းကို ခံရသူဖြစ်၏။
ဗလရဲထင်က ရှေ့ကစမ်းသပ်ခံခဲ့သူများအတိုင်း စမ်းသပ်ခံရမည့်နေရာသို့ ရောက်ရှိသွားပြီး ညာလက်မကို အပ်စိုက်ခံလိုက်သည်။ စမ်းသပ်သူတို့က လက်မတွင်းသို့ အပ်ကို တူဖြင့်ရိုက်သွင်းလိုက်သောအခါ တွန့်၍သွားသည်။ ငယ်ကျွန်ရင်း ဗလရဲထင်၏ သွေးတွန့်သောအမူအရာကို တပင်ရွှေထီး မြင်တော်မူသောအခါ “နာမည်က ဗလရဲထင်ဆိုပြီး သွေးတွန့်ရသလား” ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ကျော်ထင်နော်ရထာကလည်း ဗလရဲထင်ကို နန်းရင်ပြင်သို့ထွက်ရန်ဆိုလိုက်သဖြင့် လူပုံလယ်တွင် ဗလရဲထင်မှာ ရှက်သွားရသည်။
ထို့နောက် မိမိ၏အရှင်သခင် တပင်ရွှေထီးကို ဦးခိုက်လိုက်ပြီး
“ဘုရားကျွန်တော်မျိုးကို သတ္တိသွေးမဲ့သူဟု ထင်ကြမှာ လွန်စွာပင် ရှက်မိရပါသည်။ တကယ်တန်း၌ ကျွန်တော်မျိုးမှာ ကြောက်သွေးရှိသူ မဟုတ်ပါ။ ယခုပညာစမ်းပွဲတွင် အောင်မြင်ခြင်းမရသည့်အတွက် အလွန်ပင် ဝမ်းနည်းရပါသည်။ သို့သော် ကျွန်တော်မျိုး သတ္တိကို ရွှေနန်းရှင်ဘုရားနှင့် လူအများသိအောင် ပြလိုပါသည် ဘုရား” ဟု လျှောက်တင်လိုက်ကာ ခါးတွင် ထိုးထားသော ဓားမြှောင်ကို ရုတ်တရက်ဆွဲနှုတ်ကာ မိမိဝမ်းဗိုက်ကို ထိုးဖောက်လိုက်သည်။
ဝမ်းဗိုက်အတွင်းမှ ထွက်လာသော အူကို ဆွဲယူပြီး အနီးရှိ ကျော်ထင်နော်ရထာလက်ကို ပေးလိုက်သည်။ ကျော်ထင်နော်ရထာက ဗလရဲထင်၏ အူကို ကိုင်ထားစဉ် ဗလရဲထင်က အူဆုံးသည့်တိုင် ပြေးသည်။ အူဆုံးသည်နှင့် တပြိုင်နက် ဗုန်းခနဲလဲကျ၍ နေရာတွင်ပင် ဗလရဲထင် သေပွဲဝင်ရသည်။ မြင်ရသူတို့က ဗလရဲထင်၏ ဖြစ်ပုံကို ကြည့်ပြီး တအံ့တသြဖြစ်ကုန်ကြရသည်။
မိမိ၏ ငယ်ကျွန်ရင်း ဖြစ်သူ ဗလရဲထင်သေဆုံးသည်တွင် တပင်ရွှေထီးက ပြုံးတော်မူလိုက်ပြီးလျှင် “ငါ၏ ကျွန်တော်ရင်း ဗလရဲထင်သည် မိုက်ကားမိုက်၏၊ သို့သော် သတ္တိကား ရှိသူမဟုတ်” ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ဆိုလိုရင်းမှာ မိုက်ခြင်းသည် အဆင်ခြင်မဲ့ ဆင်ကန်းတောတိုးမျှသာ ဖြစ်၏။ သတ္တိရှိခြင်းနှင့်ကား တခြားစီဟူ၍ဖြစ်၏။
ထိုသို့ သူရဲကောင်းများကို ရွေးချယ်တော်မူခြင်းဖြင့် အလိုရှိသည့် သူရဲကောင်း ငါးရာတို့ကို ရရှိပြီးနောက် “ငါ၏ကျွန်တော်မျိုးများသည် နိုင်ငံတော်နှင့် ငါဘုရင်ကို ချစ်ရိုမှန်ကြပါပေသည်” ဟု မိန့်ဆိုကာ သူရဲကောင်း ငါးရာအား ရဲဆုအဖြစ် ကြိုးနီတပ်သော ရွှေခွက်တစ်ခွက်စီကို သနားချီးမြင့်တော်မူသည်။ ထိုသူရဲကောင်းများကိုလည်း “ရွှေခွက်ဆွဲသူရဲ” ဟု ခေါ်ဆိုကြလေ၏။
ရန်သူ့နယ်မြေပေါ်မှ နားထွင်း မင်္ဂလာပွဲ
မင်္ဂလာအခါ ရက်ကောင်းရွေးပြီးသည့် နားထွင်းမင်္ဂလာတော် ကျင်းပရန်နေ့ရက်သို့ ရောက်ရှိလာသောအခါ တပင်ရွှေထီးသည် ဟံသာဝတီရှိ ရွှေမော်ဓောစေတီသို့သွားရန် “ရန်သူအပေါင်းကို အောင်မြင်သောမြင်း” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည့် “သတ္တရုဇေယျ” အမည်ရှိသော မြင်းတော်ကို ပတ္တမြားကကြိုးတန်ဆာဆင်၍ စီးတော်မူသည်။
သူရဲကောင်းငါးရာတို့ကိုကား မြင်းကောင်းငါးရာကို စီးစေပြီးလျှင် နားထွင်းမင်္ဂလာ၊ ဥသျှောင်ထုံးမင်္ဂလာပြုတော်မူရန် အဆောင်အယောင် အခမ်းအနားတို့နှင့် မင်္ဂလာပုဏ္ဏား ရှစ်ဦးတို့ကိုလည်း ခေါ်ဆောင်တော်မူသည်။
ကေတုမတီတောင်မျက်နှာတံခါးမှ စတင်ထွက်တော်မူရာ ကျော်ထင်နော်ရထာက ဓားလွတ်ကိုကိုင်လျက် ရှေ့တော်မှထွက်သည်။ ချီတော်မူရာတွင် ကျော်ထင်နော်ရထာ၏ဖခင် မင်းရဲသိင်္ခသူနှင့် အမတ်ပေါင်းလေးကျိပ်တို့ကလည်း မြင်းကိုယ်စီဖြင့် လိုက်ပါ လာကြသည်။
သို့ဖြင့် အစဉ်အတိုင်းချီရာ လမ်း၌ အဆီးအတား မရှိဘဲ ရွှေမော်ဓောစေတီသို့ ရောက်ရှိတော်မူသည်။ ကျော်ထင်နော်ရထာ က စေတီရင်ပြင်ပေါ်သို့ မတက်မီ သူရဲကောင်းငါးရာကို . . .
“သူရဲကောင်းများက ရွှေမော်ဓောစေတီတော်ကို အထပ်ထပ်ဝန်းရံ၍ တားကြရမည်။ ကိုယ့်တာဝန်နှင့်ကိုယ် လှုံခြုံစေရမည်။ နားထွင်းမင်္ဂလာပြုတော်မူနေခိုက်တွင် မည်သူတစ်ဦးမျှ စေတီတော်ပေါ်သို့ တက်မလာစေနှင့်။ မွန်ဘုရင်ကြားသိ၍ စစ်သည်အင်အားနှင့်ချီတက်လာလျင်လည်း နိုင်အောင်ဆီးဆို့ခုခံကြရမည်။ ရွှေနန်းတော်ရှင်မင်းတရား နားထွင်းတော်မူခိုက်မှာ မင်္ဂလာတော်ကြီး ပျက်ဆီးအောင် အနှောက်အယှက် မရှိစေရ။ ရွှေခွက်ဆွဲရဲဗိုလ်များဖြစ်ကြသည့်အတိုင်း အရှင့်အကျိုးကို ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ကြရမည်” ဟု အမိန့်ပေးသည်။
တပင်ရွှေထီး၊ ကျော်ထင်နော်ရထာနှင့် အမတ်ပုဏ္ဏားတို့က စေတီတော်ရင်ပြင်တော်ပေါ်သို့တက်ကြရာ စေတီတော်ရှိ မွန်တို့မြင်လျှင် အလွန်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ကြလျက် ဦးခိုက်ဝပ်တွားကြသည်။ တပင်ရွှေထီးသည် ရွှေမော်ဓောစေတီတော်ကို လက်အုပ်ချီဦးထိပ်မိုးလျက် လက်ျာရစ်သုံးပတ် လှည့်တော်မူသည်။ မွေးနံတော်သီရိအရပ်ဖြစ်သည့် အင်္ဂါထောင့်သို့ရောက်လျှင် တန့်ရပ်တော်မူပြီး၊ ထိုအင်္ဂါထောင့်၌ ပုဏ္ဏားတော်များနှင့် နားထွင်းမင်္ဂလာသဘင် ဆင်ယင်တော်မူသည်။
ကေတုမတီဘုရင် တပင်ရွှေထီးက သူရဲကောင်းများခြံရံလျက် ရွှေမော်ဓောစေတီတော်သို့ ရောက်ရှိလာကာ နားထွင်းမင်္ဂလာပြုတော်မူသည့် သတင်း ဟံသာဝတီဘုရင် သုရှင်တကာရွတ်ပိ ကြားသိ လိုက်သောအခါ မိမိပိုင်နယ်မြေသို့ ကျူးကျော်စော်ကားမှုအတွက် ဒေါသမာန်ပွားရတော့သည်။
“မှူးတော်မတ်တော်များ . . ကေတုမတီဘုရင်တပင်ရွှေထီးသည် ငါ၏နိုင်ငံပိုင်နက်သို့ ဝင်ရောက်လာကာ ရွှေမော်ဓောစေတီတော်သို့ ဆိုက်ရောက်နေပြီဟု ကြားသိတော်မူရသည်။ ဤကိစ္စမှာ ငါ့အား ဂရုမထား၊ မလေးစားဘဲ ကျူးကျော်စော်ကားလိုက်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျူးကျော်လာသူ တပင်ရွှေထီးကို အထိန်းတော်ကြီး ဗညားလောနှင့် ဗညားကျန်းတို့ကိုယ်တိုင် တပ်တော်များဦးစီးလျက် ချီတက်ဝန်းရံကာ လက်ရအရှင်ဖမ်းဆီးကြရမည်။ လက်မလွတ်စေနှင့်”
ဟု မိန့်ကြားတော်မူလိုက်ရာ အထိန်းတော် ဗညားလောနှင့် ဗညားကျန်းတို့လည်း မွန်တပ်များကို ချက်ချင်းဆင့်ဆိုကာ မြို့တော်မှ ထွက်၍ ရွှေမော်ဓောစေတီတော်ရှိရာသို့ ချီတက်လာကြသည်။
စေတီတော်ခြေရင်းမှ ကေတုမတီ သူရဲကောင်းများကို တွေ့ရသော အခါ ရှေ့ဆက်မချီဝံ့ဘဲ အဝေးမှသာ ဝန်းရံထားကြသည်။ (ထိုအချိန်က မွန်ဘုရင် သုရှင်တကာရွတ်ပိစံရာ ဟံသာဝတီနန်းမှာ ယခုလက်ရှိပဲခူးမြို့တည်ရာတွင် မဟုတ်ဘဲ၊ အနောက်တောင်တန်းတွင်ရှိသည်။ ယခု ပဲခူးမြို့တည်ရာနေရာကို တည်ခဲ့သည့်ဘုရင်မှာ ဘုရင့်နောင်ဖြစ်ပြီး ဟံသာဝတီနန်းသစ်နေရာဟု ဆိုရမည်။ သုရှင်တကာရွတ်ပိ လက်ထက်၌ ရွှေမော်ဓောစေတီမှာ ဟံသာဝတီနန်းအပြင်တွင် ရှိနေပြီး၊ ဘုရင့်နောင် နန်းသစ်တည်မှသာ နန်းမြို့အတွင်းသို့ ရောက်ရှိသွားခြင်းဖြစ်၏။)
စေတီတော်ခြေရင်းသို့ ရန်သူတပ်များဝန်ရံလာသည့်သတင်း ကြားသိကြရလျှင် အမတ်အချို့မှာ တုန်လှုပ်သွားကြသည်။ တပင်ရွှေထီးကမူ ထိုကိစ္စ ကို လုံးဝဂရုမထား။
“ရန်သူတပ်အား အရေးထားဂရုစိုက်ကြရန်မလို၊ ငါ၏ မင်္ဂလာတော်ကိုသာ ပြီးအောင်ဆောင်ရွက်ကြပြီးလျှင် ငါကိုယ်တော်တိုင် ရန်သူတပ်ကို ဖြိုဖျက်တော်မူမည်” ဟု ရဲရင့်စွာ မိန့်တော်မူသည်။
နားတော်ထွင်းပြီးသောအခါ ဆံတော်ကို ရှစ်ဦးဥသျှောင်အသစ်ထုံးခြင်းအမှုကို ပြုသည်။ မင်္ဂလာနှစ်ရပ်ပြီးစီးလျှင် ရွှေမော်ဓောစေတီတော်ကို ဦးခိုက်ကန်တော့ကာ ဆုတောင်းတော်မူသည်။
“တပည့်တော်သည် ငယ်စဉ်က ကြံရွယ်ရင်းရှိသည့်အတိုင်း အရှင်ဘုရား၏အရိပ်ကိုခို၍ နားထွင်းမင်္ဂလာတော်နှင့် ဥသျှောင်ထုံးမင်္ဂလာများကို အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ပြီးမြောက်ခဲ့ရပါပြီ။ တပည့်တော်သည် မွန်သုံးရပ်ကို အုပ်စိုးနိုင်သည်ဖြစ်၍ ရွှေမော်ဓောအရှင်မြတ်အား အစဉ်မပြတ် ကိုးကွယ်ပူဇော်နိုင်သည့်ကိုယ် ဖြစ်ရပါလို၏ ဘုရား”
တပင်ရွှေထီးသည် ကိစ္စ များအားလုံး ပြီးမြောက်သည့်အခါ ရွှေမော်ဓောစေတီတော်ပေါ်မှ ပြန်၍ ဆင်းတော်မူပြီး၊ သတ္တရုဇေယျ မြင်းတော်ကိုစီးကာ လက်သုံးတော်ဓားကို ကိုင်လိုက်သည်။
ထို့နောက် . . .
“ငါကား တောင်ငူဘုရင် တပင်ရွှေထီး ဖြစ်သည်။ ငါနှင့်ဆိုင်၍ အဘယ်သူသည် စစ်ပြိုင်ဝံ့သနည်း၊ ကပ်ဝံ့က ကပ်ကြ” ဟု
ကြိမ်းတော်မူလိုက်ပြီးလျှင် မြင်းတော်ကို ဇက်ကုန်လွှတ်လျက် တစ်ဟုန်တည်းစိုင်းနင်းတော်မူသည်။ ကျော်ထင်နော်ရထာကလည်း တပင်ရွှေထီး၏ အပါးတော်မှ မခွာ။ မြင်းကို အတင်းနှင်၍ လိုက်သည်။ ကေတုမတီသူရဲကောင်းတို့စီးနင်းသည့် မြင်းငါးရာတို့ကလည်း တစ်ဟုန်တည်း အပြင်းနှင်ကြပြီး၊ ဘုရင်၏ နောက်တော်မှ လိုက်ကြလေ၏။ တပင်ရွှေထီးသည် မွန်တပ်များဝန်းရံထားသည့် နေရာကို အတင်းနင်၍ ထွက်တော်မူရာ မွန်စစ်သည်တို့ ကြောက်လန့်တကြားဖြစ်ကြကာ ဖရိုဖရဲဖြစ်ပြီး ရှောင်၍ ပေးလိုက်ကြရသည်။
သို့အားဖြင့် တပင်ရွှေထီးသည် မိမိဆန္ဒတော်များ အောင်မြင်တော်မူပြီးလျှင် နောက်ပါ သူရဲကောင်း ငါးရာတို့နှင့် အတူ ကေတုမတီ နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိတော်မူလေသည်။